I-Corona isabalala ngesivinini kuleli - Ilanga News
Home Izindaba I-Corona isabalala ngesivinini kuleli
I-Corona isabalala ngesivinini kuleli
EZEMPILO BONGINKOSI ZONDI
UMBUTHO wezamaphoyisa kuleli, wenza isiqiniseko sokuthi uhlale uzivikele ngezifonyo namagilavu kulandela ukuqubuka kobhubhane, i-coronavirus. Lapha amaphoyisa athathwe epatilola eDiepsloot, eGoli.
ISITHOMBE NGABE: AFP/ GETTY IMAGES
KUSHAYISA ngovalo ukukhula ngesivinini kwabahaqwa wusomqhe-le (coronavirus) eNingizimu Afrika njengoba isibalo salabo asebethelelekile seseqile ku-1 000 okwenza kucacele noma ngubani ukuthi lesi sifo sesingenisile impela, kwazise sesiqalile noku-khipha izidumbu kuleli.
Silobe kusashone oyedwa. Kuze kube manje ubungakatholakali umgomo wokuzivikela kuleli gciwane eliqubuke edolobheni iWuhan, eChina ngasekupheleni konyaka odlule kodwa manje eselisabalele emazweni amaningi emhlabeni.
Ukwenza konke esiyalwa ngakho nokuhlala njalo sinolwazi ngokuthi sekukuphi nale mpi, yizinto okumele zibe seqhulwini ezingqondweni zethu sonke esakhe kuleli.
Ngenxa yokuba lokhu kuwubhubhane oluyimpi ebhekene nesizwe sonke, umkhankaso wokuqwashiswa ngalo yiwona qhinga lokuqala uhulumeni ophuthumile ukulisebenzisa amanzi angaze abe ngenhla kwamadolo, njengoba sibonile kwenzeka nangezinye izimo zokuqubuka kobhubhane njengengculaza, ukwenza isibonelo.
Okwethu njengomphakathi wukuthobela imiyalo kahulumeni esukela ezelulekweni zososayensi nochwepheshe bezempilo.
UKUTHINTEKA KOMPHAKATHI WONKANA
Kungafani nengculaza ebifafazeka kakhulu ngokuthintwa wuketshezi noma okusaluketshezi lomuntu osenegciwane kumbe ngokuhlangana naye ngokwenza ucansi, i-coronavirus idlulela komunye ngokuthintana noma ngokuthinta indawo noma into esinalo.
Iphuzu lokuthintana limqoka kangangoba seliholele ekubeni kumenyezelwe isimo senhlekelele nesenze kwaba nesidingo sokuba kumiswe yonke into ezweni eyenza abantu basondelane ngisho nokuya emsebenzini imbala, okubizwa nge-lockdown ngolwasemzini, okuyinto eyingqophamlando kuleli zwe.
Okunye phakathi kwezinto esibone zenzeka ngenxa yale ngqophamlando yesinqumo sikahulumeni singabala lokhu:
– wukuhlehliswa kohlelo lwemincintiswano yezemidlalo enhlobonhlobo, hhayi kuleli kuphela, kepha nakwamanye amazwe;
– wukuvalwa kwezinkambo zezindiza phakathi kwamazwe ahlukene;
– wukuvalwa kwemingcele phakathi kwamazwe;
– wukuvalwa kwezikole isikhathi singakashayi nokungabi nasiqiniseko ngosuku ezizovulwa ngalo;
– wukushayeka kwamabhizinisi nomnotho wezwe esibone leli lizwe lehliselwa esigabeni sovucu nengcuphe yokuvalwa kwamanye amabhizinisi okungase kunezele inkinga yokuphela kwemisebenzi;
– wukuvalwa kwezindawo zokungcebeleka, ikakhulukazi lezo okutholakala kuzona uphuzo olunamandla;
– wukumiswa kwezinhlelo zezinkonzo zePhasika eziqhutshwa ngezindlela ezahlukene emaba-ndleni ahlukene;
– wukumiswa kwemicimbi enabantu abangaphezulu kuka-100;
– wukujutshwa kombutho wezempi ukuba uhambahambe emphakathini ulekelelana nowamaphoyisa ikakhulukazi ekugcineni imibandela yomthetho wesimo esiyinhlekelele.
UMPHAKATHI MAWUNGAKHOLWA YIMIBOno ENGAMAMPUNGE
Sekuwumlando ukuthi ngesikhathi kumenyezelwa lesi simo izwe eliphansi kwaso njengamanje, kukhona abezwakala bebalisa ngokuthi bazolimala ngasemalini yomnikelo engasezukungena ngokumiswa kwezinkonzo zePhasika.
Kwaba khona nowathi yena nabazalwane bakhe ngeke bayihlehlise eyabo inkonzo, okwalandelwa yisexwayiso sikahulumeni esithi oyokweqa lo myalo, uyohlangana nenyoka iphuza umhluzi.
Iphuzu lokugcinwa komyalo wokugonqa limqoka njengengxenye yokulwa naleli gciwane ngoba lokhu kuyiseluleko sabezempilo.
Siphetha ngokuthi umphakathi mawungalaleli noma ufafaze imibiko engamampunge ngokusabalala kwaleli gciwane nangama-khambi-mbumbulu osekukhona abathi bona banawo.
Previous articleowesilisa ongaganiwe uba ngumfana aze afe
Next articleokamaskandi ukhuthazwe usjava ukuqopha eye-hi hop